shaqooyinka waxbarashada iyo xirfadaha shaqo | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
Baro beerta waxbarashada iyo kala duwan ee noocyada kala duwan ee shaqooyinka waxbarashada. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto waxbarashada. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
In USA, carruurta oo dhan waa inay dugsiga aadaan. Sidaas nidaamka iskuulka waa weyn, oo waxaa jira shaqooyin badan oo waxbarasho si ay u buuxiyaan. Waxaa kaloo jira jaamacado badan, kulliyadaha, iyo xarumaha tababarka. Kuwan oo dhan waxay bixiyaan shaqooyin in goobta waxbarashada.
Taas oo shaqada waxbarashada?
xirriirka dugsiga - sarkaalka xirriirka dugsiga a xajiya waalidiinta, ardayda, iyo macalimiinta ku xiran oo wada shaqaynaya. Tani waxay noqon lahayd shaqo wanaagsan haddii aad rabto inaad caawiso bulshada. Baro sida loo noqon xirriirka dugsiga a.
kaaliye macallin - sidoo kale loo yaqaan caawiye macalinka, kaabayaasha waxbarasho ka caawisaa macalimiinta ee ardayda fasalka iyo taageero. shaqo wanaagsan qof aan shahaado. Baro sida loo noqon kaabayaasha waxbarasho.
Haddii aad rabto in aad macallin dugsi, meel fiican oo laga bilaabi karaana waa Waaxda Waxbarashada ee gobolkaaga. Tani waa sababta dalalka ku cadeynayaa macalimiinta, iyo shuruudaha dalalka walba way kala duwan yihiin. Aad u ogaato gobolka Department of Education.
Tallaabooyinka in uu noqdo macalinka dugsiga dadweynaha
Kuwani waa tallaabooyinka aad qaadi doonaan si ay u noqdaan macalin:
Heli shaahaadada koowaad ee: Haddii aad rabto in carruurta yaryar baraan, degree ah ee waxbarashada carruurnimada hore waa wanaagsan yahay. Haddii aad rabto in aad wax ku baraan caruurta ka weyn, ka fiirso wixii mawduuca aad rabto in aad wax ku baraan – tusaale ahaan, xisaabta - iyo in uu noqon doono heerka kuugu fiican. Baro sida si ay u helaan shahaadada bara.
Noqo macallinka ardayga: Gobolada intooda badan aad u baahan tahay in ay macallinka ardayga ka hor inta aadan noqon macallin. Waxa aad ku tababaran doonaa wax ku barayay dugsiga kuu dhow, waayo, mid ama laba xilli.
Qaado imtixaanka cilmiga: Gobolada intooda badan aad u baahan tahay in ay gudbaan imtixaanka dalkujoog macalimiinta. Baro dalkujoog.
Hel shahaado waxbaridda aad: Raadi shuruudaha macallinka gobolka.
Haddii aad leedahay xirfadaha xafiiska, waxaad codsan kartaa shaqooyinka waxbarashada ee xafiiska dugsiga ama kulliyad oo aan haysan shahaado. Later, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah tababarka ee maamulka dadweynaha in ay kaalmo uga geystaan ​​horumarinta xirfadaada. badan oo ku saabsan xirfado ku bartaan maamulka dadweynaha.
Ku qor xirfadaha luuqadda si wanaagsan loo isticmaalo – bilaabi barayay Ingiriisi cusub. Waxaad ka heli kartaa shahaado Els ah si aad u hesho shaqo mushaari ah, ama aad tabaruci kartaa hay'adda dejinta degaanka ama dadka waaweyn xarunta waxbarashada. Baro koorsooyinka ESL online.
Noqo taliye - Golaha Aqoonsiga ee La-talinta iyo Barnaamijyada Waxbarashada Related (CACREP) caddeynaya taliyayaasha dugsiga. Baro wax badan oo ku saabsan shaqooyinka la talinta iyo ku heli karaa kooras ah la aqoonsan kuu dhow.
Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo soo galootiga ah gaar ah dadka haysta fiisada (SIVs) guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Isticmaal Teach.org in badan oo ku saabsan tallaabooyinka ay bartaan in uu noqdo macallin.
Haddii aadan haysan shahaado, waxaad weli shaqada dugsiga ama jaamacadda ka heli kartaa. xarumaha shaqada Dawladda bixiyaan talo bilaash ah oo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Aad u ogaato xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Schoolspring.com waa website a shaqooyinka waxbarashada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqo waxbarasho.
Baridda iyo Barashada ardayda qaxootiga